Madaxweyne Shariif Xasan oo amray in la kordhiyo Dagaalka Shabaab – Radio Baidoa
Madaxweyne Shariif Xasan oo amray in la kordhiyo Dagaalka Shabaab
By Webmaster	 On Jan 25, 2018
Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa xalay ku hoyday degmada Bardaale ee Gobolka Baay, kadib markii shalay uu safar dhulka ah ku tagay magaaladaasi.
Wafdiga Madaxweynaha oo ay ka mid yihiin Wasiiro, Xildhibaano, Saraakiil Ciidan oo isugu jirta Ciidanka Dowladda, Ciidanka Koonfur Galbeed iyo kuwa Midowga Afrika ee AMISOM.ayaa ujeedka ay u tageen degmada Bardaale waxa ay tahay ka qeyb galka Munaasabadda Caleemka saarka Guddoomiyaha cusub ee degmadaasi Axmed Sheekh Xaamud oo dhowaan xilkaasi la wareegay.
Ammaanka magaalada Bardaale oo si aad ah loo adkeeyay ayaa maanta waxaa lagu wadaa in ay ka dhacdo Munaasabad ay xilka ku kala wareegayaan Guddoomiyihii hore iyo Guddoomiyaha cusub, iyada oo aanay dhicin arbushaad, si xalaal ahna ay xilka isugu waraajiyaan.
Shariif Xasan ayaa xalay kulamo gaar gaar ah oo aan hooyaad laheyn la qaatay Maamulka degmada, Saraakiisha Ciidamada, Qeybaha kala duwan ee bulshada oo ay ugu horeeyaan Waxgaradka.
Guddoomiyaha cusub ee degmada Axmed Sheekh Xaamud ayaa Madaxweynaha u sharaxay sida ay ugu baahan yihiin in laga caawiyo adeegyada muhiimka ah ee degmada sida Waxbarashada, Caafimaadka, iyo Amniga in la adkeeyo.
Shariif Xasan Sheekh Aadan Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa Maamulka degmada uga mahadceliyay dadaalada ay ka wadaan degmadaasi iyo sida ay ugu heelan yihiin in ay u adeegaan shacabka degmada, wuxuuna balan qaaday in wax laga qaban doono baahiyaha ka jira degmada, sidoo kale wuxuu Odayaasha dhaqanka ku dhiirageliyay in looga baahan yahay ka qeyb qaadashada wacyigelinta bulshada.
Hoggaamiyaha Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa Saraakiisha Ciidamada ku amray in xil weyn ay iska saaraan sugidda ammaanka degmada, ayna kordhiyaan Howlgalada ka dhanka ah ururka Al-shabaab ee ka socda degaanada ku teetsan degmada.
“Hadii aad tihiin Ciidanka Dowladda Federaalka, kuwa Koonfur Galbeed, iyo AMISOM, waxaa muhiim ah inaad kordhisaan dagaalka Cadowga lagula jiro, anaga oo Maamulka ahna waxaan diyaar u nahay inaan daboolno baahiyaha Ciidamada, inaga oo kaashaneyna Dowladda iyo Beesha Caalamka, shacabka Koonfur Galbeed waa in laga dul qaadaa Al-shabaab.” Ayuu yiri Madaxweyne Shariif Xasan.
Dadka falan qeeya arrimaha amniga ayaa sheegaya Degaanada maamulka Koonfur Galbeed inta badan in ay ka dhacaan dagaalo jid iyo jiho aan laheyn, maadaama inta badan Ciidamada Koonfur Galbeed aysan sameyn dagaalo ay qaadaan, taasi bedelkeedana lagu soo qaado weeraro Shabaab kaga yimaado, taasina ay keento in lagala wareego degaano ay gacanta ku hayaan.
Thaabit oo magacaabay Guddiga xil wareejinta